१६७.९७ अंकले बढेको बजारमा २१ अर्बभन्दा बढीको कारोबार, कुल बजार पूँजीकरण २ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि | आर्थिक अभियान
१६७.९७ अंकले बढेको बजारमा २१ अर्बभन्दा बढीको कारोबार, कुल बजार पूँजीकरण २ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि
पुस २४, काठमाडौं । यो सात धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा १६७ दशमलव ९७ अंकमाथि पुगेको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ५२४ दशमलव ५० विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ६९२ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेको हो । यो साता पाँच दिनको कारोबारमा चार दिन बजार बढेको छ भने एक दिन घटेको छ ।
सन् २०२२ को पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक ६० दशमलव ४१ अंकले बढेको थियो भने दोस्रो दिन ३२ दशमलव शून्य ३ र तेस्रो दिन ६३ दशमलव शून्य १ ले बढेको थियो । चौथो दिन भने नेप्से परिसूचकमा ३० दशमलव ७७ अंकको करेक्सन भएको थियो ।
सो दिनको करेक्सनपछि पाँचौ दिन पुनः नेप्से परिसूचक ४३ दशमलव २९ अंकले बढेको हो । नेपालको धितोपत्र बजारको इतिहासमै ३ हजार २०० विन्दुमाथि पुगेको नेप्से परिसूचक मंसिर २९ गते २ हजार ३०० विन्दु तल झरेको थियो । मंसिर २९ गते नेप्से परिसूचक २ हजार २५९ दशमलव ५१ विन्दुसम्म झरेको हो ।
त्यसपछि भने नेप्से परिसूचक उकालो लागेर २ हजार ७०० विन्दु नजिक पुगेको छ । पछिल्लो समय सूचीकृत कम्पनीहरुको लाभांश र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम जुट्दै जाँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरुको भनाई छ ।
यो साता बजार सकारात्मक बन्दा कारोबार रकम पनि बढेको छ । गत साता चार दिनको कारोबारमा रू. १७ अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ९६ हजार बराबरको ३ करोड ३ लाख ६१ हजार २४४ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको थियो । यो साता भने पाँच कारोबार दिनमा रू. २१ अर्ब २७ करोड ८७ लाख १२ हजार बराबरको ४ करोड १३ लाख ७२ हजार ५५६ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
गत साताभन्दा यो साता रू. ३ अर्ब ७४ करोड ९० लाख १५ हजार बराबरको १ करोड १० लाख ११ हजार ३१२ कित्ता बढी शेयर कारोबार भएको हो । यो साता कुल बजार पूँजीकरण पनि गत साताभन्दा रू. २ खर्ब ३५ अर्ब ९९ करोड ८१ लाखले बृद्धि भएको छ । गत साता रू. ३५ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रहेको कुल बजारपूँजीकरण यो साता रू. ३८ खर्ब ३ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख कायम भएको छ ।
यो साता बढेको बजारमा सबै समूहको परिसूचक पनि बढेको छ । १३ ओटा समूहगत परिसूचकहरुमध्ये विकास बैंक समूहको परिसूचक यो साता सर्वाधिक बढेको छ । गत साताभन्दा विकास बैंक समूहको परिसूचक यो साता १० दशमलव ८७ प्रतिशत बढेको हो ।
त्यस्तै यो साता बैंकिङ्गको ७ दशमलव ६५ प्रतिशत, व्यापारिकको ७ दशमलव १६ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटन समूहको ५ दशमलव .६५ प्रतिशत, जलविद्युतको ८ दशमलव ३७ प्रतिशत, वित्त समूहको ७ दशमलव ९२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ४ दशमलव ५६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ३ दशमलव ५५ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ।
त्यसैगरी अन्यको ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, लघुवित्तको ६ दशमलव ५४ प्रतिशत , जीवन बीमाको ४ दशमलव ६२ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको २ दशमलव २१ प्रतिशत र लगानी समूहको ७ दशमलव ७३ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ ।